Wasaaradda Amniga oo sheegtay in ay korotay Tirada ku dhimatay Qaraxi shalay Muqdisho ka dhacay. – Hornafrik Media Network
Muqdisho-Hornafrik-Wasaaradda Amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa ay sheegtay in tirada dhimashada ee ka dhashay Qaraxi shalay gelinkii dambe ka dhacay meel u dhaw hoteelka Weheliye ee magaalada Muqdisho ay korortay marka loo eego tiradi ay shalay shaaciyeen.
Cabdicasiis Cali Ibraahim xildhibaan ayaa waxaa uu saakay sheegay in tirada dadka ku dhintay Qaraxi shalay ay ka korotay inti uu shalay shaaciyay ee ahayd 14 ayna tahay 17-qof oo u badan Bajaajleey isagoo xusay in Qaraxa loo adeegsaday Bajaaj.
Afhayeenka ayaa shalay maruu warbaahinta la hadlay inyar un kadib qaraxa ayaa waxaa uu sheegay in ay dhinteeen 14-qof islamarkaana qaraxa loo adeegsaday Gaari inkasta oo ui haatan sheegay 17-qof iyo in loo adeegsaday Bajaaj ayaa hadana waxaa jira warar madax banaan oo sheegaya in tirada dadka dhintay ay gaarayaan 20-qof.
Golaha Wasiirada Soomaaliya oo yeeshay kulan looga hadlay Arimo dhowr ah.